सोमबारको दिन बस्नुहोस् भगवान् शिवको ब्रत, हुनेछ यस्तो लाभैलाभ ! – " कञ्चनजंगा News "
सोमबारको दिन बस्नुहोस् भगवान् शिवको ब्रत, हुनेछ यस्तो लाभैलाभ !
No Comments on सोमबारको दिन बस्नुहोस् भगवान् शिवको ब्रत, हुनेछ यस्तो लाभैलाभ !
धर्मशास्त्रमा ब्रत बस्दा मनमा शुख शान्ति र मनले चिताएको पुग्ने बताइएको छ । त्यसैले धेरै मानिसहरु हप्ताका प्रत्येक दिन एउटा न एउटा भगवानको ब्रत बस्ने गर्छन् । हिन्दु धर्ममा यो चलन पहिलेदेखी नै चलिआएको हो ।
त्यस्तै हिन्दु धर्मशास्त्रमा सोमबारको दिनलाई पनि एक पबित्र बारको रुपमा पनि लिइन्छ । धेरै मानिसहरु सोमबार भगवान शिबको ब्रत बस्ने गर्छन् । सोमबारको दिन भगवान शिबको ब्रत बसेमा ज्ञान प्राप्ति हुने बिश्वास छ । ब्रत बिहान उदाउने सूर्यदेखि सूर्य नअस्ताउन्जेलसम्मका लागी गरिन्छ।
धर्मशास्त्र अनुसार यस दिन शिव र पार्वतीको पुजा तथा आराधना गरिन्छ। तर कुनै पनि पुजाको अगाडी गणेशको पुजा भने अनिवार्य नै छ। यस दिन अविवाहित स्त्रीले असल पति पाउँ भनि ब्रत बस्ने गर्छन् । यदि तपाइ शुभ काम सुरु गर्ने सोचाईमा हुनुहुन्छ भने यस दिन ब्रत बस्नु राम्रो हुन्छ।
← ‘महिनावारीमा भाइटीका लगाएँ, छोइछाइ चलन आफैं तोडेँ’ : अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का → ‘जुत्ता सिलाएरै श्रीमतीलाई नर्स पढाउँछु’ ! यि युवाको आत्मबिश्वासलाई सलाम